Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny Yamikin bola
トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Raha mila fanazavana fanampiny momba ny fahasamihafana misy eo amin'ny mpanjifa sy ny Yamikin bola
Tsy toy ny banky sy ny sendika bola, ny vola mpanjifa dia mety ho nieritreritra ny olona sasany ho toy ny sarotra mahay eo amin'ny zavakanto izay mifamatotra ny sary.
Nakaniwa, roa ny mpanjifa bola sy Yamikin tsy mahalala ny maha samy hafa, dia ny olona sasany hoe.
Na izany aza, amin'ny fampiharana, dia samy manana fahasamihafana tena lehibe dia maro, ary tsy fantatrao fa izany, misy ihany koa ny mety mitondra loza lehibe.
dia toy izany amin'ity indray mitoraka ity, isika dia hampahafantatra momba ny fahasamihafana eo amin'ny fitantanam-bola sy ny Yamikin mpanjifa.
jereo / rehefa href = "http://xn--t8ja5qbdc8bd3083eea5016pfa.com/cooltaiwan/index.html"> ny vola nindramina avy amin'ny banky tombony sy ny fatiantoka
mba hanakarama ny mpanjifa bola vola
Inona no maha samy hafa ny mpanjifa bola sy Yamikin ? Dia
ho sahiran-tsaina mora mpanjifa fitantanam-bola sy ny maizina volamena, fa samy hafa izay afaka hozaraina amin'ny na ny mpivarotra dia nahita ao amin'ny firenena, dia manana fahasamihafana lehibe. Koa satria ny
manokana dia ahitana ireo toy ireto manaraka ireto, Raha toa ianao ka mieritreritra ny mindrana vola Miezaha foana araka ny tokony ho maika io hevitra io.
na tsia ny vola mampisambotra raharaha ny fanoratana dia nentina nivoaka
azo voalaza ho toy ny maha samy hafa ny roa Voalohany indrindra, dia ny fisiana na tsy fisian'ny raharaham-barotra mampisambotra ny vola fisoratana anarana.
mpanjifa bola no voasoratra anarana, ny tsy lasa Yamikin.
fitsipika, nahay ny kanto izay nandray ny fisoratana anarana ny raharaham-barotra mampisambotra vola tsy maintsy mba hanatanteraka asa ao anatin'ny faritry ny lal?na, ny fanaraha-maso dia ho tanterahana.
Noho izany, raha misy ny vola mampisambotra fisoratana anarana raharaham-barotra, dia tsy mety mankat? ny nihoa-pampana liana na famoriam-bola tsy ara-dal?na.
Ankoatra izany, dia mitaky maromaro raikitra finday mba hisoratra anarana, izay voasoratra anarana Yamikin finday mba mety afaka na oviana na oviana (080 bola izay malaza antsoina) no mampiavaka. Ny
mampisambotra vola fisoratana anarana raharaham-barotra, ny karazana porofo fa mpikambana iray ao amin'ny firenena no tapa-kevitra Japana Financial Services Association. Rehefa manao ny
fampiharana, izay no handrefesana izay azo tanterahana amim-pahatokiana caching, dia ho azo antoka fa manana ny hijery foana alohan'ny fampiharana.
in mampisambotra ny vola fisoratana anarana raharaham-barotra, toy ny isa sy ny isan'ny fanavaozam-baovao nomena tamin'ny fotoana fisoratana anarana, nahay ny zavakanto no fitsipika izay voatanisa izany amin'ny tranonkala toerana sy ny fivarotana.
Na izany aza, eo amin'ny tranga ny fahaiza-manao ao an-kanto izay nanao ny asa ratsy toetra izay nanomboka Yamikin, misy tranga izay efa voalaza ny fisoratana anarana noforonina isa izany noho ny tombony azo amin'ny ny zava-misy.
tampoka fotsiny amin'ny fijerena toa ho raharaha ihany koa ny mitranga raha ny marina fa efa ny vola nindramina sy ny maizina tsy nahy volamena maro, ny olona sasany dia tsy mahita fa hosoka.
rehefa fampiharana ny fampindramam-bola tsy mahazatra loatra ny orinasa, dia aoka ny fepetra toy ny miezaka mba hahita ny fitantanana ny isan'ny Internet na ny toy izany.
misy fahasamihafana eo amin'ny fitantanana dreny
mpanjifa Fitantanam-bola no tena izay misy ny vola, toy ny banky sy ny fitantanam-bola ireo orinasa efa voaomana araka ny tokony ho.
kosa, fitantanana reny maizina volamena, indrindra jiolahy.
azo ao amin'ny famoriam-bola vola ihany koa matetika ny raharaha izay ampiasaina ho toy ny tahirim-bola ny asa atao.
na toy izany, ho toy ny orinasa dia mitovy anarana, dia milaza fa eo aoriana misy fahasamihafana lehibe.
koa, toa izany koa ny fahasamihafana fahasamihafana eo amin'ny fomba fitantanana sy ny findramam-bola sy ny fandinihan fomba famoriam-bola. Ao amin'ny mpanjifa
bola ka dia tsy nampoizina ny fitantanana dreny hanome ny niraharaha, dia hahita ny famerenana sy ny fepetra ho an'ny sasany nindrana.
Noho izany, raha mbola tsy mety ihany koa matetika ny milina fampiharana, ny raharaha ny tsy ho kivy amin'ny kivy, nefa tsy namaly no mampiavaka.
Ao amin'ny maizina vola, ankoatra ny hafa sy ny ny fitsipika, manao ny bola na dia eo amin'ny olona napetraka amin'ny antsoina hoe "lisitra mainty".
no anjara ianao na dia manampy tanana ho an 'ireo izay, raha ory ao amin'ny vola vao jerena, fa tsy misy antony fa misy mamy be dia be resaka, dia milaza fa henjana fanangonana ny jiolahy tsy manam-paharoa no miandry. Ho an'ny mpanjifa
bola, ihany koa ny mikasika ny famoriam-bola: Tanteraka ireo amin 'ny fomba manaraka ny lal?na.
Tsy rangotra, ratra kely ny voninahitra ny fitantanana reny, satria ny raharaham-barotra eo amin'ny fihetsika dia nanao raharaham-barotra fa ny mahasoa ny tsirairay.
Na izany aza, ao amin'ny raharaha maizina volamena koa ho niresaka momba ny vola na dia ny anankiray roa, ary, fanangonana lalana dia miavaka amin'ny nanjakazaka na dia izany.
toy ny lal?na amin'ny fomba izay tsy niraharaha tanteraka, satria ny trumps in ihany, toy ny fonenana sy ny toeram-piasana, manome fiantraikany lalina eo amin'ny fiainana mihitsy ny mponina ao aminy.
misy fahasamihafana lehibe eo amin'ny zanabola ambonin'ny
Zanabola vola ao
mpanjifa fitantanam-bola, efa napetraka amin'ny 20% ny fetra ambony ny izay tapa-kevitra ny lal?na. Raha nindrana vola tamin'ny fotoana
fampiharana kely ary, raha ny fitambaran'ny vola nindramina dia kely, dia mety ihany koa ny hisambotra amin'ny tokony ho 10% sy ny zanabola ambany. Na ny havia sy mahitsy eo
vola miditra sy ny fitondran-tena ivelany, dia aza manahy ny mivadika na be avy amin'ny zanabola vola.
Yamikin Na izany aza dia tena matetika no nanome, ary 3.000% amin'ny 1000%, ny zanabola toy ny tsy hiraharaha ny lal?na lehibe. Ao amin'ny
matetika antsoina hoe "Toichi (liana dia 10% nitranga tamin'ny 10 andro), chitosan (mahaliana dia 30% nitranga tamin'ny 10 andro)," ny teny izay nanao hoe: dia ho ballooned ny snowball, tsy fahafahany mandoa haingana dia lasa.
ny tena fifanarahana fa tsy ny isan-jato, satria zanabola ihany no efa nandefa vola, dia tsy vitsy ny olona no mameno ny fomba tsy misy mihevitra fa ny tena be dia be ny vola.
mpanjifa maizina volamena koa ny fitantanam-bola koa, mampisambotra vola, dia ny fitantanana ao amin'ny zanabola azo.
Na izany aza, Yamikin nahay ny kanto izay manao ny fandidiana amin'ny fomba izay tsy miraharaha ny lal?na, no mampiavaka ny hitondra tena nanjakazaka hiatrika ampahany amin'ny famoriam-bola sy ny zanabola.
koa mba hanatanteraka ny caching izay afaka ho fiadanan-tsaina, no fotoana nindram-bola Miezaha mampiasa ny mpanjifa bola.
mpanjifa bola volamena koa ny maizina koa, mampisambotra vola, dia ny fitantanana ao amin'ny zanabola azo.